Tụkwasịrị Obi GXT 323W Carus - Igweisi ekweisi maka PS5 dị oke ọnụ | Akụkọ akụrụngwa
Tụkwasịrị Obi GXT 323W Carus - isi ihe dị egwu ọnụ ala maka PS5
Miguel Hernandez | 15/05/2021 19:53 | Ngwa, General, Nyocha
Ọbịbịa nke PlayStation 5, n'agbanyeghị na ọ dịla na ntapu, na-eche ozugbo na mbata nke usoro ngwa iji mezuo mkpa ndị ọrụ. N'ime ha, isi na ihe dị mkpa bụ inwe ezigbo ekweisi mgbe niile iji bulie arụmọrụ egwuregwu gị.
Anyị na-ewetara gị ụzọ ọzọ dị ọnụ ala na arụmọrụ dị mma, ekweisi igwe egwu GXT 323W Carus sitere na ntụkwasị obi kwekọrọ na PS5. Nke a abụrụla ahụmịhe anyị na ekweisi a dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ nke nwere ike bụrụ ihe enyi ọgụ na-atọ ụtọ maka PlayStation 5 gị.
Ka anyi bido na mbu, imewe na ihe nke ekweisi. Tụkwasị obi, n'ozuzu, na-etinye aka mgbe niile na ngwaọrụ na-enweghị ebumnuche kachasị adịchaghị, ha na-enweta ezigbo njedebe na karịa ụkpụrụ niile iguzogide nke soro ụlọ ọrụ ahụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe mgbaru ọsọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iji nweta uru maka ego, ọ na-egosi. Ekweisi enyochala abata na ọcha, nwere ezigbo egwuregwu na-eme ihe ike na plastị matte na-enyere aka belata mkpịsị aka. Anyị amaghị, agbanyeghị, nyere agba nke PS5 Trust Carus, otu ha ga esi esi nká.
Akụkụ: 210 x 190 x 110 mm
Arọ: gram 299
Maka akụkụ ya, n'akụkụ ya nwere obere nkọwa na simile aluminom na logo ahụ GXT ngwaahịa Ịgba Cha Cha Nke ika. Akụkụ dị n'ime nke eriri isi nwere nnukwu kwushin na otu ahụ bụ eziokwu maka ekweisi. Ihe ndị a ga-ekpuchi ntị gị kpamkpam iji kpuchido gị nke ọma. Na ntị ntị aka ekpe anyị nwere igwe okwu na-agbanwe agbanwe na eriri 3,5mm jaak na ogologo nke 1,2m na braị naịlọn a kpara akpa.
Anyị na-atụgharị ugbu a na ngalaba ọrụ aka. Anyị na-ahụ usoro nke stereo playback na ụda olu abụọ (2.0) site na ihe ọkwọ ụgbọala nke na-erughị 50 millimeters. A ga-anụ ụda ndị ahụ n'olu dara ụda n'ihi nha ha, ọ bụ ezie na anyị mesiri ya ike na ọ gaghị enwe ụdị ikike ọ bụla na ọkwa teknụzụ ma a bịa n'i imomi 7.1 ma ọ bụ 3D Sound nke PS5, ihe echebere maka ekweisi nke ika ahụ. Ndị ọkwọ ụgbọ ala a ga-enwe nsogbu nke ihe ruru 32 Ohms, ebe igwe okwu anaghị ewepu. Oge ha ga - agbanye n'etiti 20 Hz na 20000 Hz mgbe ha na - egwu egwu.
Netdị Igwe Ọdụdọ: Neodymium
Typedị Igwe okwu: Omidirectional Electret
Igwe okwu ugboro: 150 Hz - 16000 Hz
Anyị enweghị arụ ọrụ mkpọtụ, abughi ihe ngwanrọ jikọtara, mana igbe a gunyere usoro ihe ntanye maka eriri njikọ, nke ga-aga ozugbo na onye njikwa PS5 DualSense. Na teknụzụ, Taurus GXT Carus bụ ekweisi dị mfe, emebere ka anyị rute, jikọọ ha na njikwa ntanetị wee malite ịnụ ụtọ egwuregwu anyị na-enweghị nnukwu nsogbu, ọ bụkwa otu ahụ ka ojiji ya si amalite. N'ezie, teknụzụ nwere ike ịhapụ ọganiihu mana ọ na-enye anyị ihe niile ịchọrọ iji nwee ahụmịhe mara mma.
Inside ekweisi nwere a ma ama na mpe mpe akwa, otu na-eme na ekweisi. Nke a pụtara na n'akụkụ nke elu anyị anaghị ahụ erughị ala na ogologo oge nke egwuregwu vidio, ihe a niile n'agbanyeghị eziokwu na ha anaghị enwu oke oke, mana ọ bụghị n'ụzọ dị ịrịba ama. Maka akụkụ ya, Na ekweisi, inwe nnukwu ndị ọkwọ ụgbọ ala dị otú ahụ na ezigbo pad, anyị na-ahụ na ha na-ekpuchi ntị, nke a ga-anọpụkarị n'èzí, si otú a na-enye anyị ezigbo ahụmịhe na ọkwa dị iche ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịkpata ụfọdụ ahụ erughị ala na ndị na-eyi ihe nkiri.
N'aka nke ọzọ, n'akụkụ anyị na-ahụ olu na-achịkwa nke na-agaghị enwe mmekọrịta na njirimara onye ọrụ nke PS5, nke ahụ bụ, anyị nwere ike ijikwa olu nke ekweisi site na ha, mana ọ ga-edo onwe ya n'okpuru olu anyị na-ekenye na arụmọrụ ọdịyo site na bọtịnụ PS nke DualSense. N'okwu ahụ, olu dị elu dị ike, dịka anyị ahụghị "mkpọtụ" na mpaghara ndị a. Maka akụkụ ya, anyị nwekwara uru nke inwe ike ịgbalite ma gbanyụọ igwe okwu site na mgbanwe isi okwu, ọ bụ ezie na bọtịnụ ejikọtara na ime ga-ejikwa nke a.
Anyị na-eche ihu ekweisi na-atọ ụtọ, ọkachasị na-atụle ọnụahịa. Nwere ike ịchọta ha na weebụsaịtị ha ma ọ bụ na - Amazon maka euro 39,99, ịbụ ngwaahịa enyere ikike maka PS5, kamakwa na ngwaọrụ egwuregwu ọ bụla dịka PC gị, PS4 gị ma ọ bụ Xbox gị. O doro anya na ha bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị iji melite nsonaazụ gị na ọnụ ala dị ala, ebe ọ bụ na ezigbo ekweisi dị mkpa iji kpọọ egwuregwu dị mma ma ọ bụ mepụta ahụmịhe dị omimi. Dịka anyị kwuworo, anyị nwere n'ihu anyị ngwaahịa akwụ ụgwọ nwere ike ịbanye na nkwupụta anyị ngwa ngwa.
Ihe na: Mee 15 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 15 nke 2021
Egwuregwu egwu na-adịghị mma
Mara mma USB
USB ọzọ na-efu efu
Enwere ike ree ya na agba ndị ọzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Tụkwasịrị Obi GXT 323W Carus - isi ihe dị egwu ọnụ ala maka PS5
Huawei weputara MateBook X Pro 2021, laptọọpụ kacha elu ya na ihuenyo 3k